“Istaraatijiyadeena ayaa ah inaan lasoo saxiixano ciyaartoyda ugu fiican aduunka”… Florentino Perez – Gool FM
“Istaraatijiyadeena ayaa ah inaan lasoo saxiixano ciyaartoyda ugu fiican aduunka”… Florentino Perez
Dajiye August 9, 2018
(Real Madrid) 09 Agoosto 2018. Madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez ayaa xaqiijiyay in istaraatijiyada Los Blancos ay tahay in ay lasoo saxiixato ciyaartoyda ugu wanaagsan kubada cagta aduunka iyo caalamka intaba.
Hadalka Florentino Perez ayaa wuxuu imaanayaa kadib markii ay kala soo saxiixdeen Thibaut Courtois kooxda reer England ee Chelsea.
“Waxaan mar walba ka shaqeeneynaa sida aan kula soo saxiixan lahayn ciyaartoyda ugu fiican aduunka iyo iyo Spain, taasoo ah istaraatijiyadeena sanado badan, waana sii wadi doonaa”.
“Qof walba waa ku faraxsan yahay in Real Madrid ay lasoo saxiixato Thibaut Courtois ee noqday goolhaayihii ugu fiicnaa koobka aduunka 2018, waa hubaal in maanta ay u tahay maalin farxadeed garoonka Santiago bernabeu”.
“Maanta wuxuu ka mid yahay kooxda, waxaan kaaga mahad celineynaa imaatinkaaga kooxda ugu fiican adduunka”.
Thibaut Courtois ayaa yimid shalay kooxda Real Madrid kadib markii ay kala heshiiyeen kooxda Chelsea, wuxuuna ku yimid Santiago bernabeu aduun dhan35 million euros.
Arsenal oo ku fashilantay isku daygii saxiixa Ousmane Dembele (Yaa fashiliyay?)